7 lukpụrụ Mgbasa mmetụta Mgbasa Atụrụ Anya na 2021 | Martech Zone
Dika uwa siri puta na oria ojoo a na ihe ndi ozo nke diri ya, ahia ndi mmadu, karie otutu ndi oru, ga agbanwe onwe ya. Dika a manyere ndi mmadu ịdabere na ihe omuma karia nke ihe omuma mmadu ma tinyekwuo oge na netwọkụ mmekọrịta karia ihe omume na nzukọ nke mmadụ, ịmanye ahịa na mberede hụrụ onwe ya na mmalite nke ohere maka ụdị iji ruo ndị ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta na ụzọ bara uru ma bụrụ eziokwu. Ugbu a ụwa bidoro ịgbanwe ụwa mgbe ọrịa na-efe efe, ahịa influencer na-agbanwekwa gaa ọhụụ ọhụrụ, na-ewere ọtụtụ mmegharị nke mere ụlọ ọrụ ahụ n'afọ gara aga.
Ihe ndi a bu uzo asaa ndi na - acho ahia nwere ike icho ihu na okara nke abuo nke 2021 dika uwa n’agabiga oria ojoo:
1zọ XNUMX: Dị Na-agbanwe Ad Na-emefu Ndị Na-ere Ahịa
Ọ bụ ezie na COVID-19 belatara ọganihu ọ bụla nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ahịa ndị na-emetụta mmetụta anaghị enwe mmetụta dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
63% nke ndị na-ere ahịa na-ezube ịbawanye mmefu ego ha na-emetụta na 2021.
Dika ojiji netwọkụ mmekọrịta na-eto eto gafee ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ụdị na-ebigharị mgbasa ozi iji si na ntanetị gaa na ntanetị n'ịntanetị dịka ụdị ghọtara ahịa mgbasa ozi mmekọrịta bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji jikọọ ndị na-ege ntị n'ịntanetị ma kesaa ozi ha. Marketingzụ ahịa ndị na-eme ihe ike ga-adịwanye mkpa dị ka ụdị ndị na-achọ ohere iji jikọọ na ndị na-ege ha ntị na ezigbo ụzọ dị n'ịntanetị.
2zọ XNUMX: Ndị na-ere ahịa na-elegide anya na metrik
Usoro mgbasa ozi na-emetụta mmetụta ga-anọgide na-ewuwanye ebe niile, yana n'ihi nke a, akara ga-adabere na arụmọrụ ahịa onye ọ bụla na ROI nke ndị na-emetụta ha. Na, na ụdị ndị hụrụ ọhụụ na arụmọrụ site na mgbasa ozi ịmanya ahịa na-aga n'ihu n'afọ gara aga, mmefu azụmaahịa ndị na-emetụta influencer ga-abawanye. N'otu oge, na-abawanye na emefu, na-abịa a nso anya na metrik. Usoro ndị a ga-adịwanye njọ dị ka ndị ahịa na-eme atụmatụ mkpọsa ha site na nyocha nke ndị na-ege ntị, ndị na-ege ntị, ọnụọgụ oge, izi ezi nke ndị na-ege ntị, na ihe ngosi arụmọrụ dị mkpa.
Enweghị ịgọnahụ mmetụta ma ọ bụrụ na ikike influencer na-etinye aka. Tụlee Ihe Nicki Minaj kwuru na Instagram gosipụtara ya yi pink na-acha odo odo, nke mechara mechie mkpokọta 'Crocs' n'ihi nrịgo elu nke okporo ụzọ weebụ ozugbo na-eso post. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkọwa mkpọsa ha dịka KPI ndị doro anya gụnyere mmata aha, mmụba ahịa, mmekorita ọdịnaya, mgbasa ozi weebụsaịtị, na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eto eto.
3zọ XNUMX: Virtual Influens na-eto eto na-ewu ewu n'etiti ụdị
Virtual influencers ma ọ bụ na kọmputa na-eme influencers na-arụ ọrụ dị ka ndụ n'ezie ndị, bụ nnọọ ikekwe na-esote “nnukwu ihe” na influencer ahịa n'etiti ụdị. Ejiri ndị na-emetụta robot a na ndị mmadụ, ndụ ha mere ka ha soro ndị na-eso ha ma nwee njikọ site na mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ahịa. Ndị a na-eme ihe ike mebere bụ nhọrọ mara mma maka ụdị maka ebumnuche ole na ole. Nke mbu, ihe ohuru nke ndi na-ese ihe ngosi meputara, na-etinye robot-influencer ebe obula n ’uwa n’oge obula, na-ewepu ochicho nke njem nke ndu.
Ọ bụ ezie na nke a abụrụla ihe dị mkpa n'afọ gara aga, ebe ọ bụ na ọrịa ọjọọ mere ka njem jiri nwayọ nwayọ, omume a ga -aga n'ihu. Dika nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, anyị mere na akụkọ mgbasa ozi kachasị elu nke Instagram na akụkọ 2020, ndị na-emetụta robot na-arụ ọrụ nke ọma iru ndị na-ege ha ntị na imechi oghere dị n'etiti ụdị na ndị na-ege ha ntị. Na nyocha anyị, anyị chọpụtara na ndị na -eme ihe ike mebere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro atọ itinye aka na ezigbo ndị na -emetụta mmadụ. N'ikpeazụ, ndị na -eme ihe na -eme ka ọ dị nchebe n'ihe banyere aha nke ika, ebe ọ bụ na ndị na -emepụta ya nwere ike ịchịkwa ya, detuo ya ma nyochaa ya. Ndị na -emetụta ihe mebere na -ewepụta ohere dị nta maka mwepụ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na -akpasu iwe ma ọ bụ na -arụ ụka nke nwere ike ịtụba akara n'ime ọnọdụ njikwa mmebi.
4zọ XNUMX: A na-enwe ịrị elu na Nano na Micro-Influencer Marketing
Nano na micro-influencers na-enweta ewu ewu ka ha na-egosipụta njikọ siri ike na niche ndị na-ege ntị.
Ndị Nano-influencers nwere ụmụazụ 1,000 ruo 5,000
Micro-influencers nwere 5,000 na ụmụazụ 20,000.
Ọtụtụ mgbe ndị na-eso ụzọ nano na micro-influencers a na-eche na ndị a na-eme ihe dị adị na nke onwe ha, na-enye ọdịnaya, izi ozi, na nkwalite ngwaahịa na-eche nke ọma, na-emegide ndị na-eme ihe ike, bụ ndị a ga-ebo ebubo na ha na-erite uru. Nano na micro-influencers ndị a nwere nkà n'ịzụlite njikọ miri emi na ndị na-eso ha, ndị na-arụkwa nnukwu ọrụ. Obodo ndị a dị n'otu na-akwado, tụkwasịrị obi, na ndị na-emetụta ihe nwere ike ịbanye na "ọbụbụenyi" na obodo ha maka nyocha na nzaghachi dị mma. Obere ụdị ejirikarị micro-influencers kpatụ, mana nnukwu ụlọ ọrụ na-amalite iji otu ndị a na-eme ihe.
Na 2020, 46.4% nke akara kwuru site na iji hashtag #ad bụ ihe ndekọ Instagram mere yana ndị na - eso ụzọ 1,000-20,000.
Na-ekwu Okwu Ike
Ndzọ 5: Ndị na-emetụta ya bụ Veragba ụgwọ azụmaahịa na-elekọta mmadụ iji kpalite Mwepụta nke Branddị / Azụmaahịa nke Onwe Ha
Ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-etinye ọtụtụ afọ na-ewu ihe ndị na-esote, na-eme ka mmekọrịta ha na ndị na-ege ha ntị sie ike, na -emepụta ọdịnaya dabara na niche ha. A na-ahụta ndị a dị ka ndị na-azụ ahịa onwe ha na ndị na-atụ aro maka ndị na-eso ha. Kwalite ngwaahịa iji bulie ego bụ ikike dị elu nke influencer, yana azụmahịa na mgbasa ozi mmekọrịta na-agakọkarị, ịrị elu nke azụmahịa ọha na eze na-enweta traction ma na-egosi na ọ bụ ohere bara uru maka ndị na-emetụta ya.
Ndị na - emetụta ya na - azụ ahịa azụmaahịa ọha na eze site na ịmalite ụdị azụmaahịa ha na azụmaahịa ha, na - enyere ikike ire ngwaahịa ha aka. Kama ịkwalite ngwaahịa maka ụdị ndị ọzọ, ndị na-eme ihe ike a "na-atụgharị tebụl" ma na-asọmpi maka òkè ahịa. Ndị na-emetụta onwe ha na-eji njikọ nke onwe na ntụkwasị obi eme ka uto nke ụdị na azụmaahịa ha, nke bụ ihe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enweghị.
6zọ XNUMX: Ndị na-ere ahịa na-etinyekwu uche maka Mmetụta Marketingzụ ahịa Azụmaahịa
Igha n'etiti usoro mgbasa ozi mgbasa ozi, nke gụnyere ịzụta ndị na-eso ụzọ, ịzụta ihe na-amasị gị na ikwu okwu, ịzụrụ echiche akụkọ, na ikwu okwu pọdsa, na-eme ka ọga n'ihu ahịa ahịa. Mụbawanye banyere amamịghe maka ma ndị na-eme ihe ike na ndị na-eso ụzọ ha bụ ihe dị mkpa iji belata ọrụ aghụghọ. Otu usoro ntanetị mgbasa ozi kwadoro iji nlezianya nyochaa aghụghọ bụ Instagram. Ihe ikpo okwu a machibidoro iwu machibidoro usoro aghụghọ / soro, ma jiri ya tụnyere 2019, nkezi pasent nke akụkọ Instagram metụtara aghụghọ na-agbada site na 8.14%. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-emetụta emetụta wayo ka dị elu (53.39%), na 45% nke ndị na-eso ụzọ Instagram bụ bots, akaụntụ na-adịghị arụ ọrụ na ndị na-eso ụzọ. Ihe ndekọ adịgboroja nwere ike na-efu ndị mgbasa ozi ọtụtụ nde dollar kwa afọ, yana mgbasa ozi na-abawanye na mgbasa ozi mmetụta, nchọpụta aghụghọ na-adịwanye mkpa.
7zọ XNUMX: TikTok na-atụ anya inweta traction dị ka Platform Marketing
TikTok bụ akụkọ akụkọ mgbasa ozi ọha na eze kachasị nke 2020 na nde 689 kwa ọnwa ndị ọrụ na-arụ ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze nwere a 60% abawanye na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ọrụ afọ gara aga, na-eme ka ọ bụrụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ọsọ n'ụwa. Ngwa a, nke malitere dị ka ngwa ịgba egwu na egwu maka ndị nọ n'afọ iri na ụma, kemgbe ọ toro ndị nwere mmasị, ndị ahịa, na ụdị.
Ihe ikpo okwu dị mfe nke TikTok na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ọdịnaya dị mfe, biputere vidiyo, ma nwee mmasị ma na-agbaso oge niile, nke na-agba ume itinye aka na mmekọrịta dị elu karịa nyiwe mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka Instagram. Uniquezọ mmekọrịta ndị ọrụ ha pụrụ iche na-enye ma akara ma na-emetụta ohere ọhụụ azụmaahịa na ikike ị nweta ọtụtụ ndị ọrụ. HypeAuditor buru amụma na TikTok ga-enwe ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ US kwa ọnwa na 2021.
Otu ihe dị mkpa ịtụle mgbe ị na-achọpụta ụdị usoro ịre ahịa iji mee ihe bụ ịghọta ndị na-ege gị ntị. Ihe ịga nke ọma nke mgbasa ozi ahịa na-adabere na ịmara ndị na-ege gị ntị na otu esi adọta uche ha. Ozugbo a kọwapụtara ndị na-ege gị ntị nke ọma, ikpebi ụdị ikpo okwu ị ga-erute ndị na-ege gị ntị bụ nhọrọ dị mfe. Dị iche iche afọ iche iche nwere ike iji ụfọdụ ahịa nyiwe, si otú ị na-ahọrọ a ikpo okwu na gị iche afọ bụ a amamihe atụmatụ.
43% nke ndị ọrụ Instagram zuru ụwa ọnụ nọ n'agbata 25 na 34 afọ na ihe karịrị ọkara nke ndị ọrụ TikTok (69%) nọ n'okpuru afọ 24 na 39% n'etiti 18 na 24, nke mere ndị ọgbọ a nnukwu ndị ọrụ.
Na nchịkọta, Instagram na-enyere ndị tozuru etozu aka, ebe TikTok na-akwado ndị na-ege ntị.
Budata HypeAuditor nke 2021 State nke Influencer Marketing Report Budata Nkwupụta HypeAuditor nke Instagram
Tags: mamainfluencerinfluencer ad na-emefummetụta aghụghọahịa ahịammetụta aghụghọ ahịa ahịaụlọ ahịa influencermetrik ahịa metricsmmetụta ahịa ahịamicro-influencermicro-mmetụtaonye na -eme nanonano mmetụtanicki manaazụmahịa azụmahịaTikTokahia tiktokire ahịa influencermebere mebere
Jun 17, 2021 na 4:37 nke ụtụtụ
Nnukwu ọnọdụ maka ahịa ahịa. Daalụ maka ide edemede a dị ịtụnanya.